Shiinaha COVID-19 Qalabka Ogaanshaha Antigen ee Muunadaha Sanka / Xaakada （is-tijaabinta) soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Yinye
COVID-19 Ogaanshaha Antigen ...
Kaadida Hal-Talaabo Kaadi-Tiro Badan K ...
COVID-19 / Hargab A / In ...
COVID-19 Qalabka Baaritaanka Antigen ee Muunadaha Sanka / Xaakada （is-tijaabinta)
Qoondaynta: In-Vitro-Cilad-sheegid, Badeecad
Badeecadani waxay ku habboon tahay ogaanshaha tayada coronavirus-ka cusub ee nasopharyngeal suufka ama shaybaarka xaakada. Waxay bixisaa caawimaad ku saabsan ogaanshaha infekshinka cudurka loo yaqaan 'coronavirus' cusub.
Loogu talo galay Isticmaal
Riwaayadaha cusub ee loo yaqaan 'coronaviruses' ayaa iska leh gen. COVID-19 waa cudur daran oo faafa oo ku dhaca neef mareenka. Dadku guud ahaan waa u nugul yihiin. Xilligan, bukaannada uu ku dhacay cudurka 'coronavirus' cusub ayaa ah isha ugu weyn ee laga helo infekshanka; sidayaasha fayraska asymptomatic sidoo kale waxay noqon karaan ilo faafa. Iyada oo ku saleysan baaritaanka cudurrada faafa ee hadda jira, muddada cudurku waa 1 illaa 14 maalmood, badiyaa 3 ilaa 7 maalmood. Astaamaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah qandho, daal iyo qufac qallalan. Ciriiriga sanka, sanka oo dareera, cuna xanuun, myalgia iyo shuban ayaa sidoo kale laga helaa xaaladaha qaarkood.
Qalabka loo yaqaan 'COVID-19 Antigen Detection Kit' waa baaritaanka xuubka jirka ee difaaca jirka oo adeegsada unugyada unugyada unugyada 'monoclonal' si aad u ogaatid borotiinka 'nucleocapsid' ee ka socda SARS-CoV-2. Qalabka baaritaanka wuxuu ka kooban yahay qaybaha soo socda: kuwaas oo ah suufka muunada, suufka reagent, xuubka falcelinta, iyo suufka wax nuugaya. Suufka reagent-ka wuxuu ka kooban yahay kolloidol-dahab isku xirey antiboonka monoclonal ee ka soo horjeeda borotiinka nucleocapsid ee SARS-CoV-2; xuubka falcelinta waxaa ku jira unugyada difaaca jirka ee labaad ee borotiinka nukleocapsid ee SARS-CoV-2. Dharka oo dhan ayaa lagu hagaajiyaa gudaha aaladda balaastigga ah. Marka muunada si fiican loogu daro muunada, isku-xidhayaasha nuugaya suufka reagent-ka ayaa la kala diri oo ay u haajiraan wehelinta muunada. Haddii SARS-CoV-2 antigen uu ku jiro sambalka, isku-dhafka anti-SARS-CoV-2 conjugate iyo fayraska waxaa qabanaya unugyada anti-SARS-CoV-2 ee antibodies-ka gaarka ah ee lagu daboolay aagga qadka tijaabada ( T). Maqnaanshaha khadka T wuxuu muujinayaa natiijo xun. Si loogu adeego sida xakamaynta nidaamka, xariiq casaan ah ayaa had iyo jeer ka muuqan doona aagga xarriiqda xakamaynta (C) taas oo muujinaysa in mugga saxa ah ee muunada lagu daray iyo saamaynta xuubka oo dhacday.
Tubbo soosaar Muunad
Ku kaydi xirmada alaabta heerkulka 2-30 ° C ama 38-86 ° F, oo ka fogow soo-gaadhista iftiinka qoraxda. Qalabku wuu deggan yahay taariikhda uu dhacayo ee ku daabacan calaamadda.
Marka aluminiumka kiishkiisa la furo, kaarka tijaabada ee gudaha ku jira waa in lagu isticmaalo hal saac gudahood. Soo-gaadhista muddada dheer ee deegaanka kulul iyo qoyan waxay sababi kartaa natiijooyin aan sax ahayn.
Nambarka nambarka iyo waqtiga uu dhacayo waxaa lagu daabacayaa calaamadeynta.
DIGNIINTA IYO KA HORTAGA
Akhriso tilmaamaha si taxaddar leh loo isticmaalo intaadan isticmaalin sheygan.
Badeecadani waxaa loogu talagalay is-tijaabinta adeegsiga kuwa aan xirfad u lahayn ama adeegsiga xirfadda leh.
Badeecadani waxay quseysaa nasopharyngeal suufka iyo xaakada Isticmaalka noocyada kale ee muunada waxay sababi kartaa natiijooyin tijaabo oo aan sax ahayn ama aan ansax ahayn.
Xaakada halkii candhuufta laga joojin lahaa ayaa ah nooca muunada ay ku talisay WHO. Xaakadu waxay ka timaaddaa marinka neefta halka candhuuftu ka soo baxdo afka.
Haddii shaybaarka xaakada aan laga heli karin bukaanka, shaybaarka nasopharyngeal suufka waa in loo adeegsadaa baaritaanka.
Fadlan hubi in qadar sax ah oo muunad ah lagu daro baaritaanka. Xaddiga muunad aad u badan ama aad u yar ayaa sababi kara natiijooyin aan sax ahayn.
Haddii khadka tijaabada ama xariiqda kontoroolka ay ka baxeyso daaqadda imtixaanka, ha isticmaalin kaarka baaritaanka. Natiijada baaritaanka waa mid aan ansax ahayn oo tijaabada mid kale ku tijaabiso.
Alaabtaan waa la tuuri karaa. Dib-u-warshadeyn qaybaha la isticmaalay.
Ku tuur alaabada la isticmaalay, shaybaarka, iyo waxyaabaha kale ee la isticmaalo sida qashinka caafimaadka iyada oo la raacayo xeerarka ku habboon.
Hore: COVID-19 Qalabka Baaritaanka Antigen ee Muunado Xaakada
COVID-19 Qalabka baaritaanka Antibody / Antigen
COVID-19 Qalabka Baaritaanka Antigen ee Muunado Xaakada
Falanqeeyaha Fluorescence Immunoassay
Falanqeeyaha Difaaca Dahabka ee Kolloidol
COVID-19 IgM / IgG Qalabka Baaritaanka Antibody (Colloi ...